Shina mandeha ho azy shampoo mameno milina orinasa sy mpamatsy | Higee
Ity tsipika milina famenoana tavoahangy ity dia mety amin'ny fitaovana viscosity avo mameno ny famonoana sy ny fanoratana. Afaka mampita ny tsipika iray manontolo isika avy amin'ny mpamatsy tavoahangy mankany amin'ny mpanangona tavoahangy miaraka amin'ny tsipika famokarana feno.
Fepetra fandoavana: TT, L / C
Shampoo tavoahangy famenoana tavoahangy fanoratana marika Linear Line
Ny masinina dia ampiasaina amin'ny karazan-tavoahangy boribory sy tavoahangy amin'ny endrika tsy ara-dalàna amin'ny sakafo, fivarotam-panafody ary indostria simika, toy ny ranomanitra, menaka manitra, menaka fanosotra, vokatra simika ary ranon-javatra sns.
Ity milina ity dia mampiditra ny famahanana tavoahangy mandeha ho azy, famenoana, fametahana milina fanoratana ary mpanonta jet jet sns. Miankina amin'ny isan'ny masinina inona no te-hanafatra ny mpanjifa sy ny fahaizan'ny mpanjifa mila.
● Fandehanana interface amin'ny masinina lehilahy, mora sy mora azo
● Ny famolavolana Linear dia manamora ny fifandraisana amin'ny milina hafa.
● Ny faritra rehetra mifandray amin'ny akora dia vita amin'ny akora vy tsy misy fangarony. Ny fifandraisana amin'ny fitaovana dia mampiasa ny famenoana SUS 316L Servo.
● Fanaraha-maso azo ampitaina + fanaraha-maso ny efijery, fampisehoana marin-toerana ary azo itokisana.
● Famolavolana ny takelaka tsy tantera-drano, mora diovina amin'ny rano.
● Volavola fanaparitahana haingana, mora esorina ny fantsom-pamokarana peristaltika
● Ny mpanova matetika dia manitsy ny hafainganana hahatratrarana ny takiana famenoan'ny vokatra samihafa.
● Tsy misy tavoahangy tsy misy famenoana, lahasa fanisam-bokatra mandeha ho azy
● Famaritana mandeha ho azy ny fakan-tsarin'ny photoelectric tavoahangy sy fivoahan'ny otrikaina.
Teo aloha: Fitaovana milina mameno syrup avo lenta
Manaraka: Kitapo milina famenoana simika karazana Cup
Masinina mameno fanosotra
Masinina mameno molotra
Masinina famenoana losionera
Masinina mameno ranomanitra
Masinina mameno shampoo